Game နဲ့ပတ်သတ်သော - MYSTERY ZILLION
Admin များ မော်မော်များ ခင်ဗျား။ MZ မှာ Game နဲ့ပတ်သတ်သော ပြသနာများ။ သိချင်တာများကို ဆွေးနွေးဖို့ နေရာလေး တစ်ခုလောက်ရှိလားမသိဘူးနော်။ ရှိရင် ညွှန်ပြပေးပါခင်ဗျာ။ ရှာမတွေ့လို့ပါ။ မရှိရင်လည်း ထားပေးဖို့ အကြံပေးလိုပါတယ်။ ကွန်ပြူတာသမား မှန်ရင် game နဲ့ကင်းတာ ခပ်ရှားရှား မဟုတ်လား။ အဓိက ကတော့ ကျွန်တော်က gamer တစ်ယောက်မို့လို့ပါဗျာ။ ဥပမာ game install ပြသနာတွေ crack ပြသနာတွေ ကစားလို့ မရတဲ့ နေရာတွေကို နိုင်ပြီးသားလူကိုမေးဖို့ တွေနဲ့ ကစားရင်း error တက်တဲ့ပြသနာတွေအတွက်ပါ။ :77::77::77::77::77::77::77:
ဆရာလုပ်တာမဟုတ်ပါခင်ဗျာ။ အကြံပေးတင်ပြရုံ သက်သက်ပါခင်ဗျာ။
game install ပြသနာတွေ crack ပြသနာတွေ ကစားလို့ မရတဲ့ နေရာတွေကို နိုင်ပြီးသားလူကိုမေးဖို့ တွေနဲ့ ကစားရင်း error တက်တဲ့ပြသနာတွေအတွက်တင် မကဖူး
yes, and suchaforum thread should be included here in Mystery Zillion......
Gamers, VOTE this request by commenting here......:D
ဂိန်းမာဆိုတဲ့နေရာမှာ ဘယ်လိုဂိန်းမာ မျိူးအနေနဲ့ဆွေးနေချင်တာလဲခင်ဗျာ။အပျော်တမ်းသက်သက်လား။တကယ့် Heardcore gamer အနေနဲ့ ဆွေးနွေးချင်တာလား။မြန်မာပြည်အနေနဲ့တော့ heardcore gamer လုပ်ဖို့တော့ ပိုက်ပိုက်သာကုန်ပြီး ပြန်ဝင်ဖို့တော့ အခွင့်အလမ်းနဲ ပါတယ်ခင်ဗျာ။Hardware ပိုင်းကအစ performent တော်တော်တောင်းဆိုပါတယ်။ ဘယ်လိုgames မျိူးနဲ့လိုက်ဖက်သလဲဆိုတဲ့အပိုင်းကိုတော့ ကျွန်တော် တတ်နိုင်သလောက်ပြောပြပေးလို့ရပါတယ်။လောလောဆယ်တော့ ပိုက်ပိုက််ပြန်ဝင်တဲ့ world of warcraft ကိုကျွန်တော် ကစားနေပါတယ်။။ အဟေ့ :D
ဆိုတဲ့ Group လေးတစ်ခုရှိတယ် .... ၀ါသနာပါရင် .... :5:
Left4Dead မှာ ကစားရင်းနဲ့ ဘာ Error မှ မပြပဲ Desktop ကိုပြန်ရောက်သွားတဲ့ ပြသနာကို တွေ့ရပါတယ်။ အမြဲဖြစ်နေတာလဲ မဟုတ်ဘူး။ online မှာ လည်း ဒီပြသနာကို ပြောထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ သေချာတော့ နားမလည်ပါ။ နောက်တစ်ခုက Multiplayer ကစားမယ်ဆို Stream နဲ့ Log in လုပ်ရမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ Download ချကြည့်ပြီး Log in လုပ်တော့လဲ အဆင်မပြေဘူး။ multiplayer no stream crack ရှိတယ်လို့တော့ပြောတယ်။ စမ်းကြည့်တာ အဆင်မပြေသေးဘူး။ နည်းလမ်းလေးရှိရင်ပေးပါဦး။ :77::77:
World Of Warcraft ကို Lan Server ထောင်ပြီးကစာချင်လို့ပါ နည်းလမ်းလေးများသိရင် မျှပါဗျို့ (:((:((:((:((:((
RedAlert2မှာပိုက်ဆံခိုးလို့ရရင်ပြောပြပေးပါခဗျ။:77:
CRYOSTASIS ဂိမ်းကို install လုပ်ပြီးဆော့တဲ့အချိန်မှာ C++ Runtime Error ဆိုပြီးပြပါတယ် .. ပြီးတော့ပြန်ပိတ်သွားပြီး Desktop ပေါ်ရောက်သွားပါတယ် ... Installation လုပ်တဲ့အချိန်မှာလဲ ဘာပြသနာမှမတတ်ပါဘူး ... ဘာလိုနေလို့လဲဆိုတာ သိတဲ့လူများပြောပေးကြပါဦး ...
A ကနေ Z အထိရှိတဲ့ game တွေရဲ့cheat code တွေကိုဖော်ပြထားတဲ့
PC console p1,p2 xbox အစရှိတဲ့ player တွေအတွက်ပါ cheat sheet တွေလည်းပါ၀င်ပါတယ်
When I need game cheats I look in www.gamespot.com and www.ign.com. They also contains game reviews,ranking and walkthroughs for various console and PC.
game website ကောင်း လေးတွေပါ
PC,PS2,PS3 အစရှိ သည် ဖြင်.
Play Station Game cheat CD/DVD free download
PS 1 PS2 .etc cheat code download
btw... Anyone knowagood ps2 iso dowload site suitable for myanmar? I mean with easy download links like mediafire. Thx
Diner Dash:5Beta вЂ“ PC Game
ကဲ ဂိမ်းသမားတွေ အကြိုက်တွေ့မယ့်ဟာပါ.. ကွန်ပြူတာဂိမ်းသမားတိုင်းတော့သိမယ်ထင်ပါတယ်.. Diner Dash ကိုပေါ့.. Beta ဗားရှင်းပါတဲ့.. အမှတ်စဉ် ငါးတောင်ရောက်ရှိလာခဲ့ပါပြီ.။
Whenasneaky prankster removes the word вЂњfatвЂќ from FloвЂ™s В® вЂњFat Free BreakfastвЂќ sign,ahuge wave of hungry DinerToonsв„ў overrun the diner causing it to explode! ItвЂ™s up to Flo to move outside the diner and serve food to customers anywhere and everywhere she can! Find creative places to seat customers, take on outdoor disasters, and do everything in your power to keep customers happy. Can you keep up with the demand and earn enough money to rebuild and decorateanew diner from scratch, or is FloвЂ™s Diner gone forever?